Matin’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy voarohirohy ho namono olona tany Vohitrambo Betampona Fenoarivo Atsinanana, afakomaly. Voalaza fa noahiahin’ny fokonolona ho namono lehilahy iray monina ao Ampasimazava Vavatenina izy. Nandositra izy rehefa avy nanao ny asa ratsiny ka raikitra ny fifanenjehana. Tsy namelan’ny fokonolona anefa izy ka tratra tao Vohitravo. Samy nanala ny fony tamin’ilay voarohirohy avokoa ny fokonolona teo an-toerana. Tonga nanao ny fanadihadiana ny zandary avy ao amin’ny GAPJ Analanjirofo.
Aoka ho mailo fa mahazo vahana indray tato ho ato ny halatra môtô eto an-drenivohitra. Tambajotran-jiolahy raindahiny mihitsy no mivondrona ao anatin’ity tambajotrana mpangalatra môtô ity. Misy ireo mangalatra, ao kosa ireo manam-pahaizana manokana amin’ny famadihana izany sy mandoko azy ary koa mody manao taratasy hosoka rehetra momba ilay môtô halatra. Tsy kely lalana ny ratsy, koa samia mailo hatrany.
Ankizivavikely roa (12 sy 15 taona) no indray naolan’ny tovolahy iray 24 taona tao Ambodisaina Toamasina II, afakomaly. Nohidian’ilay nahavanon-doza tao an-tranony izy roa vavikely ka nanamparany ny filan-dratsiny. Afaka niantso vonjy ihany anefa ireo ankizy niharam-boina ka nosamborin’ny fokonolona izy. Naterin’izy ireo teny amin’ny borigadin’ny zandary ao Toamasina Ville ilay mpanolana.